Hip-Hop Star Nas သည်မိမိကိုယ်ကို 'Cryptocurrency Scarface' ဟုခေါ်ဆိုသည်။ - Token Myanmar
Hip-Hop ဒဏ္legာရီပုံပြင်နှင့် Nasir ဂျုံးစ်သည်သူ၏ဇာတ်စင် Nas အမည်ရှိလူသိများသည့် DJ Khaled နှင့်ရက်ပ် Jay-Z တို့နှင့်အတူဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကိုမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တေးရေးဆရာက“ cryptocurrency Scarface” လို့ပြောပြီးဆန်ဖရန်စစ္စကိုကုမ္ပဏီ Coinbase ကိုလည်းသူ့ရဲ့ကဗျာကိုပြောခဲ့တယ်။ Nas သည် Coinbase ကို ၂၀၁၃ တွင်အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ခဲ့ပြီး Nas သည်သူ၏ကုမ္ပဏီနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။
Nas Dubs သည် 'Cryptocurrency Scarface'
Nas သည်လူသိများသော hip-hop မှတ်တမ်းတင်အနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှစ၍ အမေရိကန် Nas တွင်ပလက်တီနမ်နှင့် multi-platinum အသိအမှတ်ပြုထားသောစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ် ၁၂ ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ All-time ၏အကြီးမားဆုံးအဆိုတော်များ၊ Eminem၊ Jay-Z၊ Andre 3000၊ Lil Wayne၊ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော B.I.G. နှင့် Tupac တို့နှင့်အတူရှိနေသည်။ တေးရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည့်အပြင် Nas သည်လည်းလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာစီမံကိန်းများစွာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
အကျိုးအမြတ်များသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုမှာ Nas မှဆန်ဖရန်စစ္စကိုကုမ္ပဏီ Coinbase (Nasdaq: COIN) နှင့်အတူဖြစ်သည်။ မိမိအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်သူ၏အစုစုကိုကုမ္ပဏီ Queensbridge Venture အပေါင်းအဖေါ်များမှတဆင့်လုပ်သကဲ့သို့ Nas, တိုက်ရိုက် Coinbase တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါဘူး။ Queensbridge ကစီးရီးဘီရန်ပုံငွေပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းရရှိရန်ကူညီခဲ့သည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Coinbase တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ Coinbase ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၂၀၀ အထိတန်ဖိုးရှိပြီး၊ ထို အချိန်မှစ၍ ကုမ္ပဏီသည်တန်ဖိုးကြီးမားသောပမာဏကိုရရှိခဲ့သည်။
နောက်ကျော 2014 ခုနှစ်, ကိုနာ့စ်သည် Coindesk သတင်းထောက်ဟောင်း Pete Rizzo အားပြောကြားခဲ့သည် "(Bitcoin) ဟာအင်တာနက်ထက်ကြီးမားပြီး၊ မကြီးဘူး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ " ထိုအချိန်တွင်သူသည် Queensbridge Venture Partners သည် Coinbase တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ Coinbase သည် Nasdaq တွင်စာရင်းသွင်းထားပြီးရှယ်ယာတစ်စုလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉၇ ဖြင့်ရောင်းဝယ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်အစောပိုင်း Nas နှင့် NBA ကြယ်ပွင့် Kevin Durant တို့ကဲ့သို့ Coinbase ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ငွေအမြောက်အများရရှိခဲ့ကြသည်။ လေ့လာသုံးသပ်သူများကမူ Queensbridge Venture Partners သည် COIN ၏ရှယ်ယာများထွက်ပေါ်လာချိန်တွင်ဒေါ်လာသန်း ၅၀ မှသန်း ၁၅၀ အထိပင်စုဆောင်းနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
Nasdaq နှင့်စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်သူများအကြားအရောင်းအ ၀ ယ်အပေါ် COIN ၏ပွဲ ဦး ထွက်ပြီးနောက်နာသည် Jay-Z နှင့် DJ Khaled နှင့်အတူသူ၏နောက်ဆုံးဗီဒီယိုတွင်သူ၏ Coinbase ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီသီချင်းကို“စိတ်မရှိပါနဲ့"နှင့်သီချင်းကိုလည်းဂျိမ်း Fauntleroy နှင့်သဟဇာတပါရှိပါတယ်။ Nas မှစာသားပါသောအချက်အလက်များသည်အကြွေစေ့ပစ်ခြင်းထက် cryptocurrency ကိုလောင်းကစားခြင်းအကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
“ စိတ်မကောင်းပါ၊ ဝမ်းမနည်း” ဗီဒီယိုတွင် crypto ဖော်ပြထားသည်မှာ –
ဘဝ၌အနိုင်ရရှိသူ,f** တစ်ဒင်္ဂါးပြားပစ်ချ k / ငါ Coinbased, cryptocurrency Scarface ။
သူ၏ဇာတ်စင်အမည်ဖြစ်သော“ 50 Cent” မှလူသိများသောနယူးယောက်ရက်ပ် Curtis Jackson ဂုဏ်ပြုပါတယ် Nas နှင့် Brooklyn Nets တို့၏ကြယ်ပွင့်ကစားသမား Kevin Durant အား Coinbase ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့်အကြီးအကျယ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ myပြီလလယ်တွင် Coinbase ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Cent 50 မှ“ ငါ၏လူများအနိုင်ရခြင်းကိုငါနှစ်သက်သည်။
Aprilပြီလ 15 ရက်နေ့တွင်, Nas ရဲ့တရားဝင် Twitter အကောင့် ရေးသားခဲ့သည်:
အစဉ်အမြဲရှည် crypto …. အနာရောဂါနှင့်ကျန်းမာရေး၌တည်၏။
Nas သည် cryptocurrencies ကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီး 50 Cent သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက Bitcoin အတွက်သူ၏အယ်လ်ဘမ်ကိုရောင်းချခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသော hip-hop mogul ဖြစ်သည်။ သို့သော် 50 Cent တောင်းဆိုမှုများ သူဟာရက်ပ်ဒေဝါလီခံပြီးတဲ့နောက်သူရဲ့ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရောင်းချခဲ့တယ်။ အခြား crypto အာရုံစိုက် hip hop အနုပညာရှင်များတွင် Snoop Dogg, Talib Kweli, DJ Khaled, Murda Beatz, Logic, Kanye West နှင့် Pitbull တို့ပါဝင်သည်။
Jay-Z နှင့် DJ Khaled တို့နှင့်အတူထုတ်ဝေခဲ့သောနာဆာအသစ်သည်စာသားများအတွင်း cryptocurrency နှင့် Coinbase ကိုဖော်ပြသည့်ဗီဒီယိုအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်အဘယ်သို့ထင်သနည်း။ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
၅၀ စင်တာ, Bitcoin, Bitcoin (BTC), BTC, ဒင်္ဂါးပြား, Coinbase, Crypto, Cryptocurrency Scarface, Curtis Jackson, DJ Khaled, Kanye West, ကီဗင် Durant, ဆင်ခြင်တုံတရား, Murda Beatz, နာ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, nasdaq, nasdaq လဲလှယ်, Nasir ဂျုံးစ်, မင်္ဂလာပါ, Dogg Snoop, Talib Kweli